Rindrambaiko maimaim-poana, ny CUTI ary ny fanjakana Uruguay | Avy amin'ny Linux
Rindrambaiko maimaim-poana, ny CUTI ary ny fanjakana Uruguay
Ok, mpampiasa rindrambaiko maimaimpoana. Maranitra be ny lelako ary efa ho mafana ny fitendry. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, I Uruguay dia fantatra ho zavatra mihoatra ny fanjakana buffer eo anelanelan'ny Brezila sy Arzantina. Firenena io lohalaharana amin'ny lalàna: fisarahana fiangonana sy fanjakana, fisaraham-panambadiana, latsa-bato vehivavy, firenena demokratika sosialy (talohan'ny nahatongavan'ilay revolisiona Bolshevik), sns. Androany, raha misy manohy miantso antsika hoe "The Switzerland of America" ​​dia satria saika toeram-ponenana hetra isika (fantatro hoe iza no tondroiko).
Raha eo amin'ny fampiroboroboana rindrambaiko maimaimpoana dia manana izahay ny Plan Ceibal, saingy vao tsy ela akory izay dia nisy ny tolo-kevitra iray izay hidika ho fandrosoana bebe kokoa. Volavolan-dalàna milaza izany antontan-taratasim-panjakana rehetra (ireo hery 3, ary zavamananaina maro hafa), efa navoaka tamin'ny endrika mihidy, ambara ihany koa amin'ny endrika misokatra farafaharatsiny. Ankoatry ny misokatra no aleony eo amin'ny lafiny fahazoan-dàlana hampiasa lozisialy sy fifanakalozana vaovao amin'ny fanjakana. Ary mazava ho azy, mampianatra ny fomba fampiasana rindrambaiko maimaimpoana any an-tsekoly. Mandroso ve isika? Eny, ny volavolan-dalàna dia nankatoavin'ny Antenimieran'ny depiote. Hankany amin'ny Antenimieran-doholona izy izao ary raha ekena izany (ary tsy navoakan'ny filoham-pirenena), manana lalàna izahay ary RMS dia mampianatra azy handihy candombe izahay.
Inona no mitranga ankehitriny? ny Antenimieran'ireo teknolojia fampahalalana ao Uruguay (CUTI aorian'izay) dia nambara fa manahy satria raha ekena ity tetikasa ity, «mety mampitombo ny fandaniam-bolam-panjakana ary manao tandindomin-doza ny fitomboan'ny indostrian'ny TIC«. Tanisaiko ireto teny nindramina manaraka ireto avy amin'ity fanambarana ity:
«Ny maodelin'ny fahazoan-dàlana rindrambaiko maimaim-poana dia iray hafa; tsy takatray fa tokony hanana izany ianao tombontsoa manokana momba ny hafa »
«Amin'ny ankapobeny, ny vidin'ny vahaolana ara-teknolojia dia ny fahazoan-dàlana, ny fiofanana momba ny teknisiana, ny fametrahana azy, ny fanohanana ary ny fampifanarahana na" fanamboarana "izay tokony hatao amin'io vahaolana io amin'ny fampiharana azy. «
“Amin'izao fotoana izao, amin'ny tolotra maro izay ataon'ny Fanjakana, ireo mpandoa vola dia afaka mifaninana amin'ny fanolorana vahaolana miorina amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, ary tsara fa izany no izy. Na izany aza, amin'ny fampiharana, arakaraka ny tranga mety ho ny vahaolana tsara indrindra na ratsy indrindra; Ka tsy hitantsika fa mety ny mametraka preferences ary mahazo tombony amin'ny maodely fahazoan-dàlana iray hafa »
«Ny fametrahana ny safidin'ny maso maodelin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia mifanohitra na ho an'ny indostria na ho an'ny fanjakana. Fa maninona no tsy hamokatra amin'ny fanjakana? Satria tsy voatery ho ny vidin'ny vahaolana rindrambaiko maimaim-poana no ho ambany indrindra«
“Ary tsy hitantsika fa azo ampiharina mora foana izy io, satria ankehitriny dia efa maro ny vahaolana amin'ny faritra rehetra amin'ny Fanjakana izay tsy mifototra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Ka raha noterena hifindra tany amin'ireo vahaolana rindrambaiko maimaimpoana ireo vahaolana rehetra ireo ny vidiny sy ny aretin'andoha dia ho lehibe amin'ny fanjakana«
«Ity lalàna ity dia vao mainka hampitombo ny olana efa misy ankehitriny: tsy fahampian'ny haren'olombelona amin'ny sehatry ny TIC. Manomboha mampiasa rindrambaiko maimaim-poana any amin'ny Fanjakana dia manery hamokatra fako matihanina amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, izay tsy misy ankehitriny, dia sarotra ny mahazo azy ary, ankoatr'izay, zavatra iray tena izy lafo. Noho izany dia hanaraka aho ratsy ny toe-java-misy eo amin'ny sehatra manoloana ny haren'olombelona. "
«Misy ireo mino fa momba ny rindrambaiko maimaimpoana mpilatsaka an-tsitrapo be dia be izay mandany ny fotoanany amin'ny famoronana vahaolana avy any an-trano. Ary na dia misy tranga an-tsitrapo maro aza, saika ny vahaolana rindrambaiko malalaka sy be pitsiny rehetra manana ambadiky ny orinasa izy ireo izay mandany vola be amin'ny fampiroboroboana sy fanitarana azy ireo hahazoana tombony. Rindrambaiko maimaim-poana tsy ahazoana tombony. Amin'ny ankapobeny, ny maodelin'ny orinasa miaina rindrambaiko maimaimpoana tsy mandoa vola amin'ny fahazoan-dàlana izy ireo, saingy eny ho an'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fametrahana azy, ny fanohanana azy ary ny serivisy. "
«Noho izany, ny famporisihana indostria rindrambaiko maimaimpoana any Uruguay dia tsy mamokatra noho ny fetran'ny loharanon'olombelona ananantsika. Mila mandanjalanja ny fanondranana, ny varotra, mifototra amin'ny vokatra azontsika omena alalana, mihoatra ny amin'ny serivisy sy ora ora azonay omena azy, satria tsy i Brezila na i India, izay manana ora maro mitsikera. "
«Ny andrim-pampianarana dia tsy maintsy manabe ny mpianany amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny fahalalana ny sehatra na rindrambaiko araka ny filan'ny tsena«
«Heveriko fa ny fanerena safidy rindrambaiko maimaim-poana homena dia a fandaniam-bola, amin'ny fotoanan'ny mpianatra - iza angamba tsy ho afaka hampiasa izany eny an-tsena ianao -ary avy amin'ny mpampianatra. Izany no antony hinoako fa ny andrim-pampianarana dia tokony hanana fahalalahana hamaly ny filan'ny tsena ary hihaona amin'izy ireo amin'ny fomba tsara indrindra. Tsy hitako ny lafiny tsara amin'ny fanerena na ny fanaovana laharam-pahamehana amin'ny zavatra izay tsy hotakiana«
«Ny Antenimieran'ireo Teknolojia Fampahalalam-baovao ao Orogoaiana dia matotra manahy ho fankatoavana ity volavolan-dalàna ity ao amin'ny Antenimieran'ny depiote ary antenaina fa ho hadihadiana tsara kokoa amin'ny Antenimieran-doholona, ​​mba tsy handraisana fanapahan-kevitra izay mety hitondra vokany ratsy amin'ny firenena. "
Ankehitriny dia hamaly ny tsirairay amin'ireto teny nindramina ireto isika: hiompana amin'ny valinteny navoakan'ny Antoko Pirate Uruguayan momba izany fanambarana izany, ary indrindra indrindra momba ny volavolan-kevitra izay nosoratan'i Sebastian Ventura (izay niandraikitra ny fametrahana an'ity antontan-taratasy ity miaraka)
Modely momba ny fahazoan-dàlana tsy mitovy izy ireo ary tsy fantany. Ampitahao fotsiny ny EULA amin'ny lisansa rindrambaiko maimaimpoana. Izany no antony itadiavan'ny fanjakana, amin'ny maha mpanjifa lozisialy azy, ny lisansa mety aminy indrindra.
ALL vahaolana ara-teknolojia dia manana, NA ireo an'ny rindrambaiko manana. Noho izany tsy mandeha io fialantsiny io.
Fandikana Mino izahay fa ny zava-dehibe ihany rehefa misafidy zavatra iray dia tsara ohatrinona. Tsy tokony hihevitra na ny vola, na ny fahafahan'ny hafa manova ny kaody na ny fiarovana, na ny fiofanana, na ny adidin'ny fanjakana mangarahara, na ny fahalalahana omeny ny olona, na ny fiarovana manome ny olom-pirenena hahafantatra izay ampiasain'ny governemanta, na ilay hevitra hoe ny governemanta dia mandray anjara amin'ny tetikasa manampy an'izao tontolo izao. Tsy misy azo dinihina ireo rehetra ireo. Azonao atao ihany ny mandinika hoe ohatrinona ny zavatra ilaina.
Raha lazaina amin'ny teny hafa: ny fahafantarana fa ny rindrambaiko maimaim-poana dia mety tsy maimaimpoana ary ny rindrambaiko fananana dia mety (freeware) .Milaza amiko ve ianao fa mety ho mora kokoa ny manana? Na ny fanisana izay tsy maintsy aloa aza amin'ny fananana rafitra miasa?
Fandikana: Ny fifindra-monina eo anelanelan'ny vahaolana arahin'antoka dia manana tombony lehibe amin'ny famoizany aretin'andoha maivana kokoa noho ny fifindrana mankany amin'ny vahaolana mifototra amin'ny lozisialy maimaimpoana ………………..ANDAAAAAAAAAAAA !!!!!!
Ataoko fa izany Teraka tamin'ny fampiasana Windows sy Microsoft Office isika rehetra. fahamarinana? Aorian'ity fanjohian-kevitra ity, maninona isika no mila matihanina mahay mampiasa Oracle, nefa efa manana olona maro hafa mahay mampiasa MySQL aho?
Ka ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana dia mahatonga ny orinasa ho liana bebe kokoa amin'ny rindrambaiko maimaimpoana izay ahazoana vola bebe kokoa amin'ny fandaharan'asa toy izany? Ary BAD ho an'ny indostria izany? Mieritreritra aho fa tsy maintsy ho tafintohina noho izany i Mark Shuttlework noho ny nilazan'ny RMS fa Spyware ny Ubuntu.
Raha lazaina amin'ny teny hafa: mahazo rindrambaiko manome alalana vola bebe kokoa ianao noho ny famoronana vahaolana namboarina ho an'ny mpanjifa. Ary koa, izay toerana itantanana tsara an'i Uruguay amin'ny IT dia amin'ny SERVICES, fa tsy amin'ny famoronana programa vaovao mivarotra. Inona koa, raha ny marina amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mivantana, toy ny famoronana programa na fanovana zavatra toy izany.
Efa tafintohina aho tamin'ny naha mpianatra ahy, avy eo dia mitaraina izy ireo fa ny anjerimanontolo Amerika Latina mamorona mpanolo-tsaina bebe kokoa noho ny matihanina………… araka ny lazainay ao amin'ny Federasionan'ny Mpianatra: TSY AZO VOAFIDINA NY FAMPIANARANA !!!!!!!!!
FUD mafy. Fiofanana no resahina fa tsy fanabeazana. Fotoana fohy ny fampiofanana.
Izany rehetra izany dia ny fandehanana mandetika ny foto-kevitry ny rindrambaiko maimaimpoana sy ny an'ny rindrambaiko maimaimpoana, ankoatry ny tsy fananana hevitra mampihomehy indrindra momba ny asan'ny solosaina ankehitriny.
Na izany na tsy izany, ry mpampiasa tompokolahy. Raha ekena ity tetikasa ity dia hanoratra zavatra vitsivitsy hafa momba izany aho.
Ny volavolan-dalàna: http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?Url=/repartidos/camara/d2006090779-00.htm
Ny CUTI voakasik'izany: http://www.cuti.org.uy/novedades/2701-preocupacion-de-cuti-ante-proyecto-de-software-libre-aprobado-en-diputados.html
Namaly ny PPU: http://partidopirata.org.uy/2012/12/comunicado-de-prensa-respuesta-a-carta-de-la-cuti/
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Rindrambaiko maimaim-poana, ny CUTI ary ny fanjakana Uruguay
Toa hitako fa ny fanerena na fanaovana ny safidy tokana dia karazana fahazoan-dàlana tokana. Malalaka na tsia. Toy ny demokratika be izany. Maninona raha miaina am-pilaminana? Samy fandraisana anjara tsara avokoa.
Na dia ekeko aza fa raha namoaka lalàna momba ny fampiasana rindrambaiko Maimaimpoana ho an'ny faritany manontolo ny fireneko. Mety ho tsara xD Na izany na tsy izany, ny "raiamandrenin'ny firenena" dia hivoaka eto hanao fialantsiny adala toa ireny, ary hivoaka ihany koa ny valiny toy izao.
Eto dia tsy milaza na inona na inona momba ny safidy tokana. Ny lalàna dia milaza fa "hampahafantarina azy ireo, amin'ny endrika farafaharatsiny, farafaharatsiny."
Ary ny momba ny rindrambaiko novidiana, hoy izy: "homena alalana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko maimaimpoana […] ny safidy raha toa ka voafidy ny rindrambaiko manana, ny antony dia tsy maintsy porofoina." Milaza ny lalàna fa aleony ny maimaim-poana nefa tsy manilika ny tompony.
n3 tafiotra dia hoy izy:
@Jlcmux, salama tsy haiko eto amin'ny firenenao fa any Espana misy karazana foibe fanabeazana telo: ampahibemaso, fampisehoana ary tsy miankina.
Ny vahoaka dia aloa amin'ny mpampianatra sy ny fitaovana amin'ny volam-bahoaka ary misy mpianatra afaka miditra maimaimpoana.
Ny fifanarahana dia aloa amin'ny mpampianatra, trano ary fitaovana miaraka amina orinasa iray, saingy mandray anjara ny fanjakana noho izany dia manana adidy hanaiky maimaimpoana ireo mpianatra izy ireo.
Ny antoko tsy miankina dia mandoa ny zava-drehetra amin'ny vola manokana ary ny mpianatra te hiditra dia tsy maintsy mandoa.
Misy fahasamihafana bebe kokoa, fa raha avelantsika eo izy, alaivo an-tsaina hoe nisy ny toe-tsaina araka ny anoloranao azy amin'ny resaka fanabeazana. Ny fanjohian-kevitra lojika dia ny hoe: maninona ny fanjakana no tsy maintsy mametraka vola amin'ny fampianarana ampahibemaso sy iraisana, nefa tsy mitokana? Ny zavatra lojika dia ny fanjakana mamela ny fiaraha-miaina amin'ny fanomezana fanomezana ara-bola an'ireo maodely 3, na dia eo aza ny sokajy fahatelo dia tsy avelany hisy mpianatra hiditra sy handoa azy ireo. "Fa maninona izy telo mianadahy no tsy milamina?"
Ny rindrambaiko manana "tsy mamela anao hiditra" hahitanao ny kaody ary mampandoa anao ihany koa, izay raha ny hevitro dia tsy mety ny fidirana amin'ireo mpamatsy roa ary ny fiezahana hampitovy azy ireo dia lesoka. Ny fanjakana dia tokony hampiroborobo, hampiasa vola, handoa vola amin'ny volantsika ho an'ny rindrambaiko izay ampahibemaso ny kaodiny.
Ohatra iray hafa tiako foana: andao alao sary an-tsaina hoe mandoa orinasa ny fanjakana hanoratra, hisoratra anarana ary hitahiry ireo gazette ofisialy sy ireo fandefasana ary ny rononon'ny rafi-panjakana samihafa. Ary raha te-hiditra amin'ity angona ity izahay, ny orinasa (izay efa niampanga) dia hangataka vola aminay sy amin'ny fanjakana koa ny orinasa !!!
Samy nametraka ny tanany tamin'ny lohany daholo ny tsirairay, sa tsy izany? Eny, izany no fahitako azy rehefa fanjakana maro hetsy no mandoa Micro $ matetika ho an'ny Word, saingy tsy avelan'ny Micro $ hahita antsika ny kaodin'ny programa. Mihevitra ve ianao fa tsy nasiana tombo-kase?
Fanaovana versionitis. dia hoy izy:
Afaka mandeha mipetraka any amin'ny firenenao ve aho? Eo akaikiko aho, any Paraguay ..
Na dia .. mikasika ny lalàna momba ny fanambadiana pelaka izay dinihina ihany koa .. wakala .. hehe ..
Antenaina fa eto koa izy ireo dia manomboka manome lanja bebe kokoa ny Soft. Maimaimpoana, manomboka mandray dingana saro-kenatra vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny Ubuntu 9.04 !! ao amin'ny National University ..
Mamaly ny Versionitis mahery.
Jereo izy. Tiany ny fahalalahana ary homophobic izy. Inona no mampiavaka ny fiainana.
"Jereo izy" hahahahaha tena tsara.
Raha ny tena izy, ny fahalalahana dia midika koa fa manan-jo hanana homophobic, raha ny hevitro.
Sarotra ny mamaritra ny amin'ny fahalalahana. Satria tsara ... Manan-jo hanana homophobic ianao nefa sy fahalalahana hanao pelaka ary hanambady ny fitiavanao?
Rehefa misy fahalalahana mihaino miaraka amin'ny fahalalahana hafa dia ahoana? Adihevitra lehibe tokoa izy ireo ary azo antoka fa tsy ho voavahantsika velively.
Zavatra iray ny milaza fa maharikoriko ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, hafa ny filazana fa tsy tokony hanana zo hanambady izy ireo. Tsy fantatro hoe iza amin'ireo fahitana roa ireo no manana Versionitis.
Araka ny efa novakiako, afaka ny iray rehefa hanaiky ny fahalalahan'ny hafa, sy ny fitovian'ny toetran'izy ireo amin'ny maha olombelona xD fa inona no fantatro ………. 😛
Mikasika an'io lohahevitra io, dia heveriko fa tsara ny fanohanan'izy ireo rindrambaiko maimaimpoana any Amerika Latina, tsy tokony holanin'ny governemanta amin'ny volan'ny vahoaka ny volan'ny olona, ​​ampy izay ny kolikoly. Mitombina tanteraka ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny fiankinan-doha rehetra, birao ary faritra hafa izay tsy manana rindranasa windoze manokana, ohatra ny any Munich.
Nanana izany fisalasalana izany foana aho, mahatoky amin'ny sakaizan'izy ireo ve ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy?
Maimaimpoana ny iray rehefa mihavana amin'ny tenany izy, raha misy zavatra na olona manelingelina ahy noho ny fomba fiainany na ny fomba fiainany, midika izany fa tsy salama tsara amin'ny tenany izy ary noho izany tsy afaka izany olona izany.
Tsy mankahala olona aho, tsy miombon-kevitra tsotra fotsiny amin'ny fomba fiainan'ny olona sasany, saingy tsy midika izany hoe matahotra azy ireo aho na tsy afaka miresaka tsara amin'ireny olona ireny, tsy mifanaraka amin'ny fomba fiainany fotsiny aho. , vanim-potoana.
Maimaimpoana ny iray raha avelan'ny eritreritrao izany ary ny lalàna dia tsy tokony hanoratra, mamaritra na manivana ny toerana iantombohan'ny fahafahanao misafidy
Ny fahalalahana dia ny fahaizana manao izay tianao rehefa tianao ary ny fomba tianao raha mbola tsy manimba ny tenanao na ny hafa ianao.
Manana fahalalahana tanteraka ianao, saingy fihatsarambelatsihy ny mikatsaka ny fahalalahan'ny rindrambaiko ary mahita amin'ny fomba ratsy ny fahalalahan'ny hafa momba ny firaisana ara-nofo sy ny fanambadiana ...
Ary ho an'iza ny fanambadian'ny olombelona sy ny biby? Avia, avia ... fahalalahana tanteraka na tsy misy. Mila mandroso misimisy kokoa ianao geez!
Mbola manantena ny hanambady ny solosainako aho
Izaho koa hanambady ny Notebook ..
Fa noho izany tsy maintsy hamaranako ny fisaraham-panambadiana (amin'ny vadiko olombelona) hehehe ..
Mino aho fa ny fanambadiana dia tokony ho amin'ny fifanarahana ifanaovana. Raha misy biby olon-dehibe te hanambady anao dia manana ny fankasitrahako aho (saingy tsy maintsy ankatoaviny amin'ny sonia mazava izany).
hahaha, valiny tsara
Te-hanazava aho fa ny fanoherana ny fanambadiana pelaka dia tsy midika hoe fanoherana ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy ary noho izany dia tsy mitovy ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy. Avy any afovoany afovoany aho ary tiako ny olona rehetra miaraka amin'izay tadiavin'izy ireo, raha ny marina tsy manana zavatra manohitra ny fananana vady maro aho (jereo, malala-tanana kokoa noho ianao aho) fa na ahoana na ahoana Heveriko fa azo raisina ho fanambadiana izany, zavatra izay mivoaka ivelan'ny tontolon'ny lehilahy miaraka amin'ny vehivavy. Manantena aho fa nanazava tsara ny momba ahy.
Azontsika atao ny manova ny fanambadiana ho an'ny fanambadiana :-P. Raha ny hevitro dia lany andro ilay teny hoe fanambadiana. Toa «henjana» ny biraon'ny reny.
Ny fanambadiana dia olombelona 2 izay voatanisa miaraka ambanin'ny lalàna ary mizara andraikitra
Manana ny zony hanambady izy ireo, Angamba tsy alohan'ny fiangonana, miankina amin'ny lazain'ny pretra izany, fa manambady ara-dalàna, raha azony atao
Mbola tsy raisiko ho toy ny rafitra voajanahary ny fanambadiana. Ny andrim-panjakana voajanahary dia aleon'izy ireo mampirafy
Rainbow_fly, ary ny famaritana noforoninao, avy taiza ianao, avy any am-paosin'i Doraemon xD?
Ny fanambadiana pelaka dia tsy maintsy miandry hatramin'ny volana aprily. Nahemotra ny fifidianana
Hetsika tena tsara, antenaiko fa mahavita azy ireo izy ireo ary mijanona tsy manome vola ho an'i Etazonia, tsy afaka miaina any Amerika Latina mandrakizay ...
Tsara ny raharaha. Indrindra rehefa tsy fantatrao izay ho avy amin'ity, fahombiazana, na loza iray manontolo. Mazava ho azy fa manohana rindrambaiko maimaimpoana aho, nefa mety ho sabatra roa lela ihany koa, indrindra any amin'ny firenena izay zara raha misy ny loharano. Misalasala ihany aho. Mazava ho azy, raha nilaza zavatra toy izany ny tao Costa Rica, dia azo antoka fa hifoha amin'ny afo mirehitra isika miaraka amina saina maro be misy varavarankely miloko mamaky EULA miaraka amin'ny antsipiriany rehetra momba ny fanatanterahana anay satria nanapaka ny teboka faha-XNUMX tamin'ny fifanarahana. ho fampiasana teny.
Raha ny marina dia tsy hitako izay hatao amin'ity. Raha mpankafy iray any am-piasana no mahazo Ubuntu 10.04 ary efa narary nify izy, alao sary an-tsaina ny fifindra-monina tanteraka amin'ny safidy hafa maimaim-poana.
Ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsara kokoa foana noho ny hafa amin'ny lafiny rehetra. Mino aho fa ny olona tsirairay dia tokony hanana fahalalahana foana hahafahany manavaka sy misafidy. Fa raha te hanao an'io aloha dia tsy maintsy fantatry ny tsirairay tanteraka ny dikan'ny hoe afaka, raha tsy izany tsy manompo azy ny fahalalahana. Noho izany dia apetraka ny tahotra.
Rehefa miresaka momba ny «States» isika, dia fanontaniana hafa ihany koa, satria ny fanjakana dia mitantana ny volan'ny olom-pirenena rehetra, noho izany eto dia manjaka ny zava-misy sy ny tahiry, izay tsy maintsy isafidianantsika ny safidy tsara indrindra, izay amin'ity rindrambaiko maimaimpoana ity foana. , izay, ankoatry ny mora vidy kokoa, dia tsara kokoa. Rehefa miresaka momba ny "Fanjakana" aho dia miresaka firenena manana soatoavina demokratika.
Tena marina aho Uruguayan ary ny tena marina dia manala baraka ahy izy ireo acaaaaa nobodyeeee tsy mahalala na inona na inona mihitsy momba ny fitendry.
Raha ny fahitako azy ny marina dia izao no zava-mitranga foana ny kolikoly ary te hanao izany araka ny fombany izy ireo ary miady amin'ireo Orogoaiana vitsivitsy milaza fa tsy misy dikany fa tsy ny antsasaky ny dd no manana hevitra momba an'io, mora be izany
25watts dia hoy izy:
Mba hivoahan'ity tetikasa ity dia tsy maintsy manana haba iray farafaharatsiny izy raha tsy izany… Ary kanosa i Pepe! Ny voalohany kitapo saka ary ho velona ny birao! Lopez Mena ilay Orogoaiana Yabrán! Amin'ny teny vitsivitsy Uruguay taonjato faha-21.
Valiny amin'ny 25watts
Manomboka amin'ity fotoana ity dia manomboka maneho hevitra momba ny politika Uruguay aho ……….
Azafady azafady ny lohateny, tsy ny Fanjakana URUGAYO fa ny fanjakana «URUGUAYO»
misaotra nihinana anao aho
Eny… Ireo no lohahevitra tsara indrindra hanombohana flamewar. Mampalahelo fa sitrana ireo mpamaky an'ity bilaogy ity, tsy haiko ny manohitra ny trolling.
Raha ny marina, ny versionitis mahery no nanombohana azy, nametraka ny tetik'asa fanambadiana pelaka ao amin'ny colander. Angamba izany dia tsy misy raha ampitahaina amin'ny flamewar izay azo atao raha misy ifandraisany amin'ireo mpanao politika Arzantina.
Eny, saingy midika izany fa mankaleo kokoa ireo lahatsoratra, manome tratra ny fiainana ireo bilaogy kely fotsiny.
Tokony hiaiky aho fa tsy tiako ho sosotra ary lasa tsy fidiny aho ……………………. NIKOMBOKA !!!!!!!
Fanamarihana tena tsara!
Mahatonga ahy hieritreritra zavatra maro ny marina, saingy mieritreritra aho fa mandritra izao fotoana izao, satria tolo-kevitra iray fotsiny avy amin'ny firenena hafa ankoatrako (Mexico), dia tsy maintsy manaja sy mihaino ny Orogoaiana aho amin'ny toerana misy azy ireo. Holazaiko fotsiny fa hitako fa tena mahaliana sy tena ilaina ny manaraka.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny resaka fampahalalana sy angon-drakitra, araka ny hitantsika fa nifindra monina tany amin'ny safidy Linux koa i Russia (tsy tadidiko loatra ilay naoty) ary nivoaka ny SEO Reimoond nilaza fa "SECURITY" ary Andriamanitra dia nihomehy ny rehetra. Nefa andao jerena ny zava-misy mahaliana, tamin'ny 2012 ny lampihazo Android (miaraka amin'ny kerneln'ny linux) no tena notafihan'ny malware sy ny viriosy. Izay voalaza teo aloha hoe: "Tsy misy rafitra informatika azo antoka 100% ary tsy ankanavaka ny GNU / Linux" satria ankehitriny dia manomboka mahita ampahany betsaka amin'ny tsena i Linux (Android, Jolla, Ubuntu, FirefoxOS, sns). ankehitriny rehefa hahita fanafihana marobe isika. Na dia mazava ho azy aza, ny ankamaroan'ny fanafihana mahomby dia amin'ny alàlan'ny fampiharana na fampahalalana nomen'ny mpampiasa iray ihany.
Izany rehetra izany dia zavatra heveriko fa tsy maintsy hatrehin'ny mpanao lalàna Uruguay. Fa ho ahy kosa dia holazaiko fa ny lozisialy maimaim-poana, satria afaka mijery ny kaody ny olona, ​​ary mitatitra ireo lesoka azo antoka amin'ny fiarovana, na mampiasa izany ho tombontsoan'ny fivoarany manokana, satria tsy an'ny fanjakana ny rindrambaiko, raha tsy an'ny firenena iray manontolo Manefa ny rindrambaiko amin'ny alàlan'ny hetrany.
Hanaraka ny naoty aho. Tena mahaliana diazepan
Toa tsy mitombina amiko izay kasain'ny Fanjakana raha tsy manao fandinihana tsara fa hevitra tsara, raha ny rindrambaiko tsy miankina no vahaolana, hoy aho hoe aiza no avelan'izy ireo ireo fampiharana voalaza fa miantoka ny fiaraha-miasa amin'ny Windows 7. na 8 dia nanome toky azy ireo fa tsy hihazakazaka izay hitranga amin'ireo fampiharana ireo izay tsara izy ireo kanefa azo antoka fa efa nokasaina hatry ny ela izy ireo ohatra ho foxpro, ny Visual Basic 6 dia tokony hifindra monina koa, mipetraka eto Uruguay aho ary hitako ireo rindranasa ireo, io dia ny fakantsary Cuti kokoa noho ny hoe nanao taranja teny amin'ny They in java aho, mieritreritra aho fa tsy dia nahavita zavatra iray izy ireo ary ny iray hafa andehanantsika java dia multiplatform, saingy tsotra raha toa ka te handrindra zavatra manokana izay manao amin'ny alàlan'ny tranonkala, mbola azonao idirana avy amin'ny firefox sy ny rindrambaiko na dia tsy miankina aza izany no tokony ho vahaolana ho an'ny Heveriko fa manana mpiara-miasa marobe ny CUTI ary tsy te hiala aminy amin'ny mikraoba dia maharary mafy, ny teboka fanitarana. amin'ny sehatra vaovao dia tsara, ilay mpamorona iray ihany Mampiasako ilay izy ka ny platform na ny rafitra anananao dia ported.
Ity, araka ny nolazaiko teo aloha, dia tsara raha ny fahita azy, saingy tsy maintsy jerena tsara ny lafy tsara sy ny lafy ratsy raha toa ka tsy misy dikany sy tsy misy dikany ny zavatra natsangan'ny CUTI, raha manana fotokevitra maro kokoa izy ireo, hino aho, amiko fa ny zava-mitranga dia tahotra fanovana. zavatra rehetra.
Matoky aho fa tsy hohadinoina ireo volan'ny CUTI ireo
Uruguay dia mbola ohatra iray amin'ny fandrosoana ara-tsosialy any Amerika atsimo
Manantena aho fa eto Arzantina dia hotanterahina ny drafitra tahaka izao ... eto dia manome netbook misy windows izy ireo ary nametraka fizarana gnu / linux tsy misy dikany izy ireo mba tsy hampiasan'ny zazalahy ... hanapotehana azy rehetra ny raharaham-panjakana dia karakarain'ny rindrina malefaka mihidy, ary mahatsikaiky aho fa ny orinasa tsy miankina mampiasa gnu / linux! Aza manadala raha ny andro lasa izay tao Fravega dia hitako fa nanana Debian tamin'ny solosain'ireo mpiasa rehetra izy ireo! ary miaraka amin'ny XFCE !!
Salama, mandehana mitaingina eto http://huayra.conectarigualdad.gob.ar/ Io no rafitra fiasa vaovao (mifototra amin'ny Debian miaraka amin'ny gnome 3) izay ho tonga amin'ireo milina hampifandray ny fitoviana manomboka amin'ny martsa 2013 Greetings!
Famintinana ireo fanambarana nataon'ny CUTI:
Ny tsena dia mifehy, ny tsena tsitoha no manapa-kevitra izay ilaina sy izay tsy, ny tsena eny rehetra eny no manapaka izay manan-danja sy izay tsy. Noho izany, ny fanabeazana dia tsy maintsy mikendry mazava hanome fahafaham-po ny tsena.
Ahoana no nahatonga ny orinasam-pifandraisana tahaka ny CUTI niditra amina andrim-panjakana, izay i Uruguay no lohalaharana amin'ny lalàna?
"Ahoana ny fomba nidiran'ny antokon'olona mpihetsiketsika toy ny CUTI any amin'ireo andrim-panjakana, ka i Uruguay any amin'ny vanguard mpanao lalàna?"
Fantatrao, ilay zavatra nanontaniako ny tenako ihany.
Ny tena marina dia, nanararaotra nanandrana ny ceibalitas aho teto ary ny voalohany dia maloto fa ny sekoly ambaratonga faharoa kosa tsara dia mitondra ubuntu miaraka amin'ny gnome 2 ary tena tsara izy ireo
Tsia, ny XO rehetra (ny solosaina momba ny drafitra Zeibal) dia miaraka amina kinovan'ny Fedora. Ny mahasamihafa ny an'ny sekoly sy ny an'ny sekoly ambaratonga faharoa (amin'ny haavon'ny rindrambaiko) dia ny ambaratonga faharoa miaraka amin'ny gnome napetraka ary ny hafa kosa tsy mametraka.
Etsy ankilany, heveriko fa ny drafitra ceibal dia zavatra iray izay misy fampiharana ratsy be ary fomba iray fotsiny hividianana vato avy amin'ny governemanta io (hevitro manetriketrika, nomen'izy ireo ahy ary iray amin'ireo vitsy aho ny olona izay mampiasa azy amin'ny zavatra iray, ny solosaina hafa rehetra dia misy effets manga voatsabo amin'ny écran).
rehetra x ny kambana, ilay malemy fananana dia ho faty miaraka amin'ny kapitalisma.
Ry sakaiza malala, toa ahy fa toy ny any amin'ny fireneko (PR) sy amin'ny maro hafa, ireo olona ireo dia miteny ho an'ny tombontsoany manokana ary miresaka amin'ny Senat amin'ity fomba ity ka mieritreritra izy ireo fa hisy krizy hitranga ao amin'ny sekoly, amin'ny Governemanta sy amin'ny toekarena. Fampihorohoroana voalaza, izay ihany. Farafaharatsiny mba mitady fomba hanampiana ny firenena sy hanao fandrosoana amin'izany faritra izany izy ireo, eto no tadiavin'izy ireo dia ny manankarena ny naman'ny mpanao politika ary mamela eo anelanelan'ny fanovana ny governemanta ny mpitsikilo politika hafa sy ny ankamaroan'ny antoko mifanohitra hatao. sarotra kokoa ho an'ny governemanta ankehitriny ny manao zavatra tsara. Tsy manao zavatra ho an'ny vahoaka izy ireo, fa ny fizarazarana rehetra. Mampalahelo ny tranga misy anay.
Daniel Bertua dia hoy izy:
Andao tsy afangaro amin'ny maimaim-poana ny daholobe.
Entim-panjakana ny fampianarana ho an'ny daholobe sy ny fanjakana, saingy TSY MAIMAIM-POANA izy ireo, na ahoana na ahoana, dia fanomanana maharitra, izany hoe, mamatsy vola azy rehetra izahay, miaraka amin'ny TAXES. Na farafaharatsiny isika rehetra izay voatery mandoa hetra ary tsy manalavitra, na amin'ny hetra karama, VAT, hetra ambaratonga voalohany sns, sns, sns.
Noho izany, isika mpandoa hetra dia tokony afaka misafidy ny fomba hampiasana ny volantsika AZY ary tsy hamela izany amin'ny "whim" (kohaka, kohaka honenana, kolikoly, komisiona, kohaka, kohaka, sns.) manao fahefana.
Azoko atao ny mieritreritra toerana tsara kokoa handoavan-ketra AZY noho ny fandoavana ny Lisansa Rindrambaiko Mihidy sy tsy miankina, na ho an'ny orinasa eo an-toerana na ho an'ny mpamorona (ny kely indrindra), ary koa ho an'ny firenena maro (ny be indrindra, vakio ny Windows, MS Office, sns.).
BURRADA hafa ...
Voalaza fa tsy maimaim-poana ny rindrambaiko maimaim-poana, satria mila mandoa vola ianao ho an'ny fanohanana ara-teknika sy ireo orinasa miandraikitra azy;
toy ny hoe tsy miaraka amin'ny Rindrambaiko mihidy sy tsy miankina ireo sarany ireo.
Tsy fantatro izay orinasa miasa miaraka amin'ny rindrambaiko mihidy sy manokana, izay manome ny fanohanany ara-teknika MAIMAIMPOANA.
TSY MISAOTRA, aleoko manao INVESTA, amin'ny fiofanana, fiofanana ary fampandrosoana miaraka amin'ny Free Software.
Ny mpandraharaha kely sy ny fananana tokana izay tsy maintsy mifanerasera amin'ny Fanjakana dia avela ihany koa.
TSY MISY AZO VOASAINA hampiasa rindrambaiko nakatona sy tsy miankina.
Kely kokoa ny fanerena mivantana na tsia hampiasana azy ireo amin'ny fomba tsy nahazoana alalana na tsy ara-dalàna (toy ny mahazatra ankehitriny).
Androany, fanambarana marobe momba ny fomba DGI sy BURROCRATICOS PUBLICOS ihany no azo atao amin'ny alàlan'ny Windows sy miaraka amin'ny Programme CLOSED sy PRIVATIVE.
BURRALEBIKA BURROCRATIC tsotra izao ity.
Misy zavatra izay tsy azo atao raha tsy amin'ny Internet Explorer sy Windows ary amin'ny programa Adobe.
Na izany na tsy izany, tokony hohazavaina fa TSY TANJONA aho, satria mpandraharaha kely FALY SADY manana birao fanontana ary miasa MAFY amin'ny Free Software sy Linux, satria ireo ihany no azoko iaraha-miasa amin'ny HONESTA. , Fomba matihanina matihanina sy 100%.
Satria mafy loha aho ary nanapa-kevitra ny hanandrana ho an'ny tenako, na eo aza ny fenitra pseudo-n'ny indostria napetraka.
Psudostandard izay nanery ahy hanao klôtika angidimby nakatona sy manokana, handeha malalaka mamakivaky zaridaina mimanda sy amin'ny alina.
Tiako kokoa ny rindrambaiko maimaim-poana amin'ny Linux, satria afaka mampiasa azy ireo araka izay tiako aho, rehefa tiako, izay tiako sy izay tadiaviko ary averiko:
AMIN'NY VONINAHITRA, MAFANA ary ara-dalàna 100%.
Inona ny / dev / null ary ahoana no hanampiany anao?
Fakan-tsary Polaroid misy Android